बन्दको प्रभाव : कहाँ–कहाँ के भयो ? « Kakharaa
बन्दको प्रभाव : कहाँ–कहाँ के भयो ?
काठमाडौं । नेत्र विक्रम चन्द विप्लव समूहले आह्वान गरेको नेपाल बन्दको अधिकाँश स्थानमा प्रभाव परेको छ । काठमाडौं उपत्यकामा पनि अरु दिनको तुलनामा निकै कम गाडी चलेको महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले जनाएको छ । महाशाखाका अनुसार लामो दुरीका गाडि एउटा पनि छुटेका छैनन् । विद्यालयहरु बन्द गरिएका छन् ।
यसैबीच, बन्द अवज्ञा गरेको भन्दै मकवानपुरमा २ वटा गाडी जलाएका छन् । हेटौंडाको चौकिटोलमा ना ७ ख ९४९३ नम्बरको मिनी ट्रकमा आगजनी गरिएको हो । आगो लाग्नासाथ प्रहरीले निभाएपनि मिनीट्रकको अगाडिको भागमा क्षति पुगेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरका प्रवक्ता प्रहरी नायव उपरीक्षक यज्ञप्रसाद भटट्राईले जानकारी दिनुभयो ।
मकवानपुरकै थाहा नगरपालिकामा पनि गएराती ना ६ ख ८००७ नम्बर मिनी ट्रकमा आगजनी गरिएको छ । मिनिट्रक जलेर पूर्णरुपमा क्षति भएको प्रहरीले जनाएको छ । प्रहरीका अनुसार हेटौंडाको बुद्धचोकमा राती भेटिएको बम नेपाली सेनाको डिस्पोजल टोलीले आज विहानै निस्क्रिय पारेको छ । ३ नम्बर प्रदेशको राजधानीसमेत रहेको हेटौंडामा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक मुकेश कुमार सिंहले जानकारी दिनुभयो ।
पूर्वी नवलपरासीको बुलिङटार गाउपालिका ३ मा विस्फोट गराउन राखिएको सिलिन्डर प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । गएराती साढे ९ बजे गाउपालिका प्रमुख शसिकिरण बास्ताकोटीको घर देखि ३ सय मिटर पूर्व श्रीधर गिरीको खाली खेतमा विस्टोट गराउनका लागि टायर, दाउरा बाली सलिन्डर विस्फोट गराउने तयारी गरेकोमा क्याप बाट ग्यांस लिक भएपछि सिलिन्डर सुरक्षित रहेको बर्दघाट सुस्ता पूर्व नवलपुरका प्रहरी नायव उपरिक्षक अर्जुन रानाभाटले जानकारी दिनुभयो ।
यसैबिच पूर्वी नवलपरासीमा गुडिरहेको एक ट्रक र जिपमा पेट्रोल बम प्रहार भएको छ । बिहान ३ बजे मधयविन्दु नगरपालिका ११ दाउन्ने स्थित पुर्व पश्चिम राजमार्गमा लु २ ख १०८ नम्बरको सिमेन्ट लोड भएको ट्रकमा विप्लव समुहका कार्यकर्ताले पेट्रोल बम प्रहार गरेका हुन । पेट्रोल बम प्रहार गर्दा ट्रक अनियन्त्रीत भई सडक बाट ५ मिटर तल खसेको र आगलागी भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपुरले जानकारी दिएको छ । ट्रक चालक तनहुको ब्यास नगरपालिका ४ का ३३ बर्षिया अमर विकको अनुहारमा पोलेको छ भने सह चालक भने समान्य रहेको बताईएको छ । उनीहरुको मनकामना पोलिक्लिनिकमा उपचार भैरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपुरका प्रहरी नायव उपरिक्षक अर्जुन रानाभाटले जानकारी दिनुभयो ।
ट्रकमा लागेको आगो प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको रानाभाटले बताउनुभयो । त्यस्तै बिहान साढे ३ बजे कावासोती नवगरपालिकाको वडा नम्बर १६ मा बा ३ च ९३ नम्बरको जीपमा पनि विप्लव समुहका कार्यकर्ताले पेट्रोल बम प्रहार गरेका छन् । पेट्रोल बम प्रहार बाट जिपमा प्रयोग गरीएको त्रिपालमा आगो लागेको र समयमै प्रहरीले आगो नियन्त्रणमा लिएकोले जिपमा कुनै क्षति नभएको प्रहरी नायव उपरिक्षक रानाभाटले बताउनुभयो ।